आरक्षण स्वच्छता के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki आरक्षण बंधक
रिजर्भेसन हेवन वास्तवमा बंधकमाथि लिने दायित्व बिना समय अवधिमा बंधकको लागि ब्याज दर सुरक्षित गर्न प्रयोग गरिन्छ। बैंक निश्चित ब्याज दर को लागि आय प्रदान गर्दछ ताकि सम्पत्ति खोजकर्ता ब्याज दर को उतार चढ़ाव को जोखिम मा उजागर गर्दैन। सम्भावित भविष्य उधारकर्ता अझैसम्म क्रेडिट सम्झौतामा प्रवेश गरिएको छैन, तर निश्चित ब्याज दर आरक्षण बंधक द्वारा सुरक्षित छ। यो विशेषतया उपयोगी छ यदि ब्याज दरमा बढि चाँडै आशा गरिएको छ, तर कुनै रियल स्टेट अझै भेटिएन। यद्यपि, एक बाध्यकारी ऋण समाप्त गर्न सम्भव छैन, किनकी त्यस्तो अवस्थामा कुनै गैर-स्वीकृति दण्ड धम्की दिइन्छ, त्यस घटनामा कुनै खरीद भविष्य भविष्यमा बनाइएको छैन। सम्पत्ति को वित्तपोषण को ब्याज दर देखि छ जमानत मूल्य यस कारणको लागि, आरक्षण बंधक सबै बैंकद्वारा दिइएको छैन किनभने ब्याज दरले सम्बन्धित सम्पत्ति बिना गणना गर्न सकिदैन।
रिजर्भेसन हेवनको फाइदाहरू वा हानिहरू के हुन्?
आरक्षण हाइव निर्माण वा खरिद अनुबंधको पछिल्लो पछाडि सम्म बंधकहरूमा रुचिको सुरक्षा गर्दछ। आधा प्रतिशत प्रतिशत बिन्दुको ब्याज दरमा वृद्धिले 150 000 यूरो ऋण अधिक महंगी बनाउँछ9000 यूरो सम्म, यदि ब्याज दर निर्धारण दस वर्षको लागि तय गरिएको छ। आरक्षण कार्यालयको साथ, पैसा बचत गर्न सम्भव छ किनकी ब्याज दरमा वृद्धि एकदमै उच्च ऋणको लागी हुन सक्छ। थप फाइदा भनेको सामान्यतया कुनै प्रावधान ब्याज खर्च गरिएन। उधारकर्ता आफ्नो निर्णयमा नि: शुल्क छ वा त्यो सम्पत्तिको भविष्य अधिग्रहणमा वास्तवमा ऋण लिने वा छैन। यदि रिजर्भेसन अवधिको अवधिमा ब्याज दर घट्यो भने, यो उही बैंकबाट अधिक अनुकूल प्रस्ताव बनाउन सक्छ वा अझ अनुकूल अनुकूल बैंकमा स्विच गर्न सक्छ। यसबाहेक, रिजर्भेसन अफिसमा ब्याज दर निश्चित छ, यदि पछि लाग्दछ भने, ब्याज दर लाभले सम्झौताको आधारमा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। भिडियोमा
आरक्षण स्वच्छ भण्डारमा आधारभूत डेटा व्याख्या गरिएको छ। विनाश हो कि स्व-नियोजित व्यक्ति र उधारकर्ताहरू न्यून संग इक्विटी समस्या पाउनुहोस् र शायद नैतिक आरक्षण हो।
जर्मनीमा अचल सम्पत्ति बजार सधैँ उत्प्रेरित हुन्छ
महानगरीय क्षेत्रमा पसंदीदा आवासीय इलाकाहरू र प्रसिद्ध ज्ञात पर्यटक केन्द्रहरूमा, त्यहाँ धेरै भिजुअल ग्राहकहरू नयाँ सम्पत्ती खोज्दै छन्। जवान विवाहित जोडीहरू उच्च अचल सम्पत्तिको लागतबाट प्रभावित हुन्छन् र आरक्षण भण्डारको साथ आफ्नो घरको वित्तपोषण संग पैसा बचत गर्न सक्दछन्। गृह वित्तको आपूर्तिकर्ता मात्र उच्च प्रतिस्पर्धी दबाबको अधीनमा छैन, तर यो ब्याज दर दबाव पनि। वित्त को लचीला रूपहरु, आरक्षण स्वच्छता स्टोर को रूप मा, यस को एक उदाहरण हो; त्यो सिद्धान्त: पहिलो सम्पत्ति र त्यसपछि अचल सम्पत्ति ऋण पनि उल्टाउन सकिन्छ। आरक्षण ऋणले घरको अधिग्रहण गर्ने सोचका लागि यो सम्भव बनाउँछ, छ महिना सम्मको लागि एक उपयुक्त क्रेडिट रिजर्भ गर्न सक्दछ। सम्पत्तिको खरिदमा निर्दिष्ट जानकारी जस्तै सम्पत्तीको प्रकार (जस्तै घर वा अपार्टमेन्ट), स्थान र भविष्यको निर्माणको निर्माण आधी वर्ष पछि गणना पछि ब्याजको गणनाको आधार हो। दुवै पक्ष (बैंक र उधारकर्ता) एक क्रेडिट सम्झौता समाप्ति को विकल्प मा सहमत छ। जबसम्म ऋण भुक्तान गरिन्छ, भूमि रजिस्टर मा ऋणदाता को दावी भूमि बंधक या बंधक को पंजीकरण द्वारा सुरक्षित छ।
अघिल्लो लेखpromissory टिप्पणीहरू